Xiisad dagaal oo ka taagan degaano ka tirsan Gobolka Sanaag – Banaadir Times
By banaadir 9th January 2021 85 No comment
Xiisadaaan oo ah mid dagaal ayaa waxaa ay ka Maanta ka taagan tahay degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Sanaag, waxaana ay u dhaxeysa Soomaaliland iyo Puntland.
Xiisadaan ayaa waxaa ay ka dambeeysay, kadib markii Soomaaliland ay ay degaannada Dhahar iyo Xin-galool ka bilaawday Barnaamijka diiwaan-gelinta Cod-bixiyaasha Doorashooyinka Somaliland.
Mas’uuliyiin ka tirsa Somaland ayaa gaaray Magaalada Dhahar, halkaas oo diiwaangelinta ay ka socota, waxaan ay sheegeen inay dagaal kala horgegi doonaan hadii Puntland ay isku daydo inay joojiso Barnaamijka diiwaan-gelinta Cod-bixiyaasha Doorashooyinka Somaliland.
Degaannada xiisada dagaal ka taagan tahay ayaa waxaa kamid ah degaannada Dhahar, Xingalool, Buraan, Ceelaayo iyo Buuraan oo hoos yimaada Sanaag, waxaana dadka degaannadaas ay sheegeen inay cabsi dareemayaan.
Gobolka Sanaag degaano ka tirsan oo ay ku muransan yihiin Puntland iyo Soomaliland ayaa horay waxaa iga dhacay dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada labada Maamul halka weli degaannada qaar ay Ciidamada isku hor-fadhiyaan.
Seynisyahan Soomaali ah oo uu kudhacay Corono.
Khasaaro ka dhashay is rasaaseyn ka dhacday duleedka Beledweyne
Madaxweyne Farmaajo “Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay udub dhexaad u yihiin horumarka iyo dib-u-curashada dawladnimada dalka”
By banaadir 12th August 2018